बन्दैछ ‘हाइटेक’ जेल, सुरक्षाकर्मीले बोक्नु पर्दैन हतियार, कैदीलाई जेल बाहिर रोजगारीको सुविधा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बन्दैछ ‘हाइटेक’ जेल, सुरक्षाकर्मीले बोक्नु पर्दैन हतियार, कैदीलाई जेल बाहिर रोजगारीको सुविधा !
ग्रीनल्याण्ड । जेल अर्थात, विभिन्न अपराधबापत कानुनअनुसार सजाय भोग्ने थलो । जेलमा छुट्टै किसिमका नियमहरु हुन्छन्, जसले मानिसको स्वतन्त्रतालाई सीमित गरिदिन्छ । तर, विश्वमै एउटा अनौठो जेल बन्दैछ, जो अन्य जेलको तुलनामा निकै फरक हुनेछ ।ग्रीनल्याण्डको राजधानी नुकमा बन्दै गरेको जेलमा सन् २०१९ बाट कैदी राख्न सुरु गरिने छ । तीन तहको सुरक्षा प्रवन्ध भएको यो जेलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले हतियार बोक्ने छैनन् ।
युरोपीय–एटलान्टिक क्षेत्रमा रहेको ग्रीनल्याण्डको यो जेललाई विश्वकै आधुनिक र ‘हाइटेक’ मानिएको छ । ८६ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको जेल भवनमा ७६ सेल बनाइएको छ । तीमध्ये ४० वटा सेल बन्द र ३६ वटा खुला हुनेछन् । बन्द सेलमा खतरनाक अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई राखिनेछ ।
जेलमा कैदीलाई सुधार्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिने जनाइएको छ । यहाँसम्म कि, केही कैदीलाई दिनभर सहरबजारमा गएर काम गर्न समेत छुट दिइने छ । त्यस्ता कैदीले दिनभर बाहिर गएर रोजगारी गर्ने छुट पाए पनि बेलुका जेल मै फर्कनु पर्ने छ ।
जेलमा विद्यालय, पुस्तकालय, स्पोर्ट कम्प्लेक्सलगायतका सुविधा पनि हुने छ । जेलको वरिपरि सिसाको पर्खाल हुनेछ, जहाँबाट कैदीले बाहिरि दुनियाँलाई नियाँल्न पाउनेछन् ।
विश्वभर संक्रमितको संख्या २ करोड ४८ लाख, १ करोड ७२ लाख संक्रमण मुक्त
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित हुनेको संख्या २ करोड ४८ […]
विश्वभर १ करोड ७० लाख ७६ हजार ५२९ जना कोरोना संक्रमित निको
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसबाट विश्वभर २ करोड ४६ लाखभन्दा बढी मानिसमा […]
भारतमा पाँच तले भवन भत्किँदा झण्डै ९० जना पुरिए, उद्धारको कार्य जारी
काठमाडौं। भारत महाराष्ट्रमा पाँच तले भवन भत्किँदा झण्डै ९० जना पुरिएका छन् । स्थानीय प्रहरीका अनुसार सोमबार […]